Malunga nathi -I-Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co, Ltd.
Guangzhou Lindian okrelekrele Technology Co., Ltd. ngumvelisi oqeqeshiweyo ozinikele kuphando, uphuhliso, uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yebhodi emhlophe esebenzayo, ibhodi efanelekileyo, ithebhulethi esebenzayo, iimveliso zonxibelelwano phakathi kwabantu kunye nekhompyuter, kunye nezisombululo, ezisetyenziswa ngokubanzi kwezemfundo, ukufundisa, intlanganiso yequmrhu, umboniso weshishini, kunye nendawo yoluntu.
Sisekwe ngo-2009 kwaye siseGuangzhou, eChina.ifactory igubungela ngaphezulu kwe-10000 yeemitha zesikwere, kwaye ineziko lobuchwephesha be-R & D, kubandakanya iinjineli ezingama-20 kunye namagcisa, Ukuze kubonelelwe ngeemveliso kunye neenkonzo ezilungileyo, sakhe umgangatho wangoku Inkqubo yolawulo ehambelana ngokungqongqo nemigangatho yamazwe ngamazwe. kwaye ndafumana i-CE, FFC, FCB, CCC, IS O9001, ISO14001, OHSAS18001 iziqinisekiso.
Iimveliso zethu zithandwa kakhulu eYurophu, eMelika, mpuma Asia, Middle East naseAfrika njl OEM kunye ODM zonke yamkelwe, Nokuba ukhetha imveliso yangoku kwikhathalogu yethu okanye efuna uncedo zobunjineli isicelo sakho. Sigcina ukukhangela kunye nokuphuhlisa iimveliso zethu ezintsha ukwanelisa iimfuno ezintsha ezivela kubathengi. Umgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo kunye neenkonzo ezilungileyo zihlala zizithembiso zethu kubo bonke abathengi bethu. Wamkele abathengi abavela kwihlabathi liphela kumzi mveliso wethu ngokundwendwela kunye nesikhokelo!
Chukumisa ukuBonisa okuPhathekayo kwePaneli, Umthengisi weBhodi emhlophe osebenzisanayo, Iphaneli yokuBonisa iMfundo ePhakamileyo, Zonke zikwiPaneli enye yeFlat eSebenzayo, Iphaneli eKhokelwayo ye-Smart esebenzisana nayo, Amaqela angama-75 aBonisa iPhaneli ePhathekayo,